Tatoazy amin'ny rantsan-tànana: zavatra 5 hodinihina | Ny fanaovana tatoazy
Antonio Fdez | | tombokavatsa, Tattoos on
Mieritreritra ny hanao tombokavatsa ny rantsan-tànanao? Tsy vao sambany io Ny fanaovana tatoazy miresaka momba ny tombokavatsa rantsan-tànana. Karazana tatoazy izay faritan'ny mpizara matetika ho "faran'izay mahery" (raha miala amin'ny fo na teny efa miparitaka be isika ao amin'ny mombamomba ny iray amin'ireo rantsantanana). Ary io karazana tatoazy eo amin'ny rantsan-tànana io dia ho hita eny na eny mandritra ny taona. Ary, raha tsy manamboatra makiazy isika dia tsy hisy fomba hanafenana azy.
Amin'ity vanim-potoana ity dia somary mora ny mahita olona manana tombokavatsa. Ankoatr'izay, manana mpinamana ny mpizara iray izay nametraka ny tatoazy voalohany tamin'ny iray amin'ny rantsan-tanany. Moa ve fomba tsara hanombohana amin'ny tontolon'ny tatoazy? Amin'ny ampahany eny, na dia mety manana ny hevitra ratsy aza izy io. Izany no antony anangonana Zavatra 5 tokony hotadidina momba ny tombokavatsa amin'ny rantsan-tànana. Raha mieritreritra manao tatoazy iray na maromaro ianao, dia hahaliana anao ity lahatsoratra ity.
1 Hita mandritra ny taona izy ireo
2 Mora manimba azy ireo kokoa
3 Toerana ahena ho an'ny tatoazy
4 Iray amin'ireo faritra ao amin'ny vatana izay maharary indrindra ny mahazo tatoazy
5 Mety hisy heriny eo amin'ny fiainanao izany
Hita mandritra ny taona izy ireo
Zavatra efa noresahintsika io. Ny tatoazy amin'ny rantsantanana dia hita mandritra ny taona. Raha tsy kely dia kely ny tatoazy ary ao amin'ny mombamomba ny rantsan-tanan'ny iray, dia saika tsy ho afenina izany. Ary eny, raha te-hanarona azy ireo isika dia tsy maintsy mampiasa makiazy manokana hahafahantsika manarona azy ireo. Izany no antony tokony handinihanao eritreritra ny hevitra hahazoana karazana tatoazy amin'ny rantsan-tananao.
Mora manimba azy ireo kokoa
Ny hoditry ny tanana no tena miharihary amin'ny karazana agents ivelany izay misy fiantraikany amin'ny fizotry ny fahanterany. Na asa na noho ny antony hafa dia mila fikolokoloana manokana ny hoditry ny tanana mba ho malama sy ho tanora. Noho izany, ny tombokavatsa natao amin'ity faritra amin'ny vatantsika ity dia mijaly amin'ireo olana ireo ihany koa. Aorian'ilay zavatra niainako manokana dia azoko atao ny manantitrantitra izany Ny tatoazy amin'ny rantsan-tànana dia mila fanamboarana tsindraindray isaky ny taona vitsivitsy Satria na mitandrina tsara aza ianao dia ho very loko haingana.
Toerana ahena ho an'ny tatoazy
Mazava ho azy fa ny rantsan-tànana dia iray amin'ireo faritra ao amin'ny vatantsika izay manome toerana kely kokoa ho an'ny tatoazy. Izany dia noho izany Voafetra amin'ny alàlan'ny tsy fahafahantsika manao fotsiny tatoazy kely. Afaka mahita litera vita amin'ny tombokavatsa eo amin'ny rantsan-tànana tsirairay isika matetika mba hamoronana teny na marika kely na zavatra toy ny vatofantsika, diamondra na tselatra, ankoatry ny hafa. Raha tsy azonao antoka ny mahazo tatoazy kely dia tsara kokoa ny mieritreritra manao tatoazy amin'ny faritra hafa amin'ny vatanao.
Iray amin'ireo faritra ao amin'ny vatana izay maharary indrindra ny mahazo tatoazy
Na dia rehefa mahazo tatoazy aza ny zava-misy, ny fanaintainana dia tsy tokony ho antony iray mamaritra fanapahan-kevitra, tokony ho fantatrao izany ny rantsantanana dia iray amin'ireo toerana maharary indrindra ny mahazo tatoazy. Na izany aza, ary satria ny tatoazy izay atao amin'ity faritra amin'ny vatana ity dia matetika dia kely dia kely, dia fanaintainana zaka tanteraka.
Mety hisy heriny eo amin'ny fiainanao izany
Mahamenatra izany, fa ankehitriny, amin'ny asa maro dia ny fananana tatoazy hita maso toy ny amin'ny rantsantanana afaka mitaona hahafeno fepetra amin'ny asa sasany. Na dia manana tatoazy kely fotsiny aza isika amin'ny iray amin'ireo rantsantanana izay azo afenina mora foana, dia tsy tokony hanana olana isika, antony iray hafa koa izany raha jerena maka tombokavatsa amin'ny rantsan-tanana iray dia fanapahan-kevitra lehibe toy izany toy ny hoe eo amin'ny tendany isika ohatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » tombokavatsa » Tatoazy amin'ny rantsantanana: zavatra 5 tsy tokony ho adino
Avoaho izay anananao tao anaty tatoazy anatomika
Tatoazy Rose ho an'ny vehivavy